26th September, 2021 Sun १३:३२:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । तपाईले आजसम्म धेरै महंगो रक्सीको बारेमा त सुन्नुभएको होला । बोतलको एकलाख दुईलाखसम्मका रक्सीहरु त कतिपयले विशेष अवसरमा पिउने गर्दछन् ।
तर कुनै रक्सी डेढ करोड भन्दा बढी मूल्यको पनि हुन्छ भनेर पत्याउनुहुन्छ ? पत्यार लागोस पनि कसरी ?
तर यो साँचो हो । हालैमात्रै एउटा शताब्दियौं पु्रानो रक्सीको एक बोतल डेढ करोड भन्दा बढी मूल्यमा लिलामी भएको छ ।
ह्विस्की ब्राण्डको यो रक्सी २ सय ५० वर्ष पुरानो छ । अहिले यसलाई यसको वास्तविक मूल्यभन्दा छ गुणा बढीमा लिलामी गरिएको हो । १९०० शताब्दीको यो बोतल १ लाख ३७ हजार डलर अर्थात् डेढ करोड भन्दा बढी मुल्यमा लिलामी भएको छ ।
जर्जियाको ल्यांग्रेजमा रहेको एउटा जनरल स्टोरमा यसलाई राखिएको थियो ।
सन् १८६० मा बोतलमा राखिएको यो वल्ड इंग्लेड्यू व्हिस्कीमा रहेको मदिरा भने अहिलेसम्म बिग्रेको छैन । भनिन्छ, यो रक्सी प्रख्यात लगानीकर्ता जेपी मोर्गनको थियो रे । व्हिस्कीको बोतलमा एउटा लेबल राखिएको छ । त्यसमो यो १८६५ भन्दा अघि बनेको र जेपी मोर्गनको घरमा थियो रे । मोर्गनको मृत्युपछि यो भेटिएको थियो । कतिपयले जेपी मोर्गनले पनि यो रक्सी कसै अरुबाट सन् १९०० को शुरुआती दिनमा किनेको बताइन्छ । पछि उनले यो आफ्ना छोरालाई दिएको थिए । सन् १९४२ ताका यसलाई क्यारोलिनाका गभर्नर जेम्स बायन्र्सलाई दिइयो ।
यसको वास्तविक मूल्य २० देखि ४० हजार डलरबीच हुनसक्ने बताइन्छ । तर गत जुनको ३० तारिखमा सकिएको लिलामीमा यो रक्सीलाई मिडटाउन म्यानहट्टनमा रहेको एउटा संग्रहालय र शोध संस्थान मोर्गन लाइब्रेरीलाई १ लाख ३७ हजार ५ सयमा बेचियो ।